Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1080
Zaka tsara : mpampiantrano… mihono
Par Taratra sur 24/11/2016 Divers, NS Malagasy
Inona marina no atao amin’ity hoe Frankôfônia, hitondra inona ho an’ny Malagasy… ? Fanontanian’ny ankamaroan’ny olom-pirenena tsotra ireo. Tompon-trano mihono izany, fa anarany no hoe mampiantrano. Tena tsy fantatry ny ankamaroan’ny Malagasy ny fahatongavan’ireo vahiny amin’izao? Toy izay misy hatramin’izay ihany: na resaka an-karihary sy izay atao imasomaso aza izany, mampanontany tena. Mbola raharaha hafa […]
Radanoara Julien : “Mila resahina amin’ny Frankôfônia ny fitakiana ireo Nosy malagasy”
Par Taratra sur 24/11/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Ao anatin’ny fampiantranoana ny Frankôfônia tanteraka izao. Hitondra inona amin’ny Malagasy? Maneho ny fijeriny ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien: “Tokony hatao resaka mivaingana sy misy vokany ny amin’ireo Nosy malagasy manodidina, fa tsy atao resabe fotsiny.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Inona marina no tena atao amin’izao fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia eto Antananarivo izao fa tsy […]
Dinika ho fanavotam-pirenena : “Efa fanao eran-tany ny fiatoana politika”
“Tsy hoe manatanteraka ny olona rehefa tenenin’ny praiminisitra ny fiatoana politika. Efa fanao eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy eo amin’ny raharaham-pirenena ny fiatoana politika.” Izay ny fanehoan-kevitry ny mpitarika ny hetsika Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP), Ratolojanahary Maharavo, manoloana ny fampiantranoan’ny fitondram-panjakana malagasy ny Frankôfônia. Raha mahatadidy isika vahoaka malagasy, tamin’ny taona 1989: nisy krizy teto […]
Nanodinkodim-bola ny ambasadaoro Maraokanina
Nambaran’ny gazety any Maraoka, ary nandraisana fepetra avy hatrany fa sarona tamin’ny fanodinkodinam-bola nataony ny ambasadaoron’i Maraoka eto amintsika i Mohamed Amar. Tokony hanaovana asa soa ho an’ny vahoaka malagasy io vola io, saingy nahodiny. Nandefa iraka maika taty amintsika ny fitondran’ny andriamanjaka ka izao sarona izao ny nataony. Anisan’ny anton’ny fanesorana amin’ny andraikiny maha […]
Fivoriamben’ny Frankofonia : nampahafantatra ny toerany any Antsirabe ny Star
Miavaka Antsirabe amin’ny fandraisana ny fivoriamben’ny Frankofonia. Tanàna nanaovana ny fivorian’ny fikambanan’ny mpanao gazety mampiasa ny teny frantsay (UPF) ary mbola nametrahan’ny mpanjakan’i Maraoka tetikasa maro. Manohana izao fivorian-dehibe izao ny orinasa Star, noho ny anjara toerany lehibe eo amin’ny toekarena ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Hararaotina ny fandalovan’ireo vahiny ireo, hampiroboroana sy hampahafantarana ny faritra […]
Harena an-kibon’ny tany : tsy mipetra-potsiny ireo zatra nahazo tombontsoa
Hidina any amin’ny faritra maro, misy fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny BCMM. “Hidina hijery ny zava-misy izahay ary hanazava amin’ny mponina any amin’ireny toerana ireny ny lalàna misy, ny hialana amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ary indrindra, ny tombontsoa ho azony eo aminy sy ny manodidina ”, hoy ny tale jeneralin’ny BCMM, Ratsimbazafy David, ny 22 […]
Banky iraisam-pirenena : ambany indrindra amin’ny fitakian-ketra i Madagasikara
Par Taratra sur 24/11/2016 Economie, NS Malagasy
Hanome vola maimaimpoana 65 tapitrisa dolara ny Banky iraisam-pirenena, hanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana. Andrasany kosa ny fahaiza-mitantana sy ny mangarahara amin’ny fitantanan’ny fanjakana ary ny fanohanana ny sehatra tsy miankina. Notsorin’ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena, Rtoa Coraille Gevers, fa “ niantraika tany amin’ny toekarena ny tsy famamarinan-toerana ara-politika sy ny fitantanana ratsy eto Madagasikara nandritra ny taona […]
Antsirabe : vonjy tavanandro ny lalana
Raikitra ny fanaovana zara fa vita! Azo lazaina ho toy izany ny fanamboaran-dalana ao an-tampon-tananan’ Antsirabe, Renivohitr’i Vakinankaratra manoloana ny fahatongavan’ny mpanjaka Maraokana sy ny filohan’ny repoblika, hametraka ny vato fehizoron’ny fotodrafitrasa roa lehibe, fanomezana avy amin’ny andriamanjaka Maraokana, Mohamed VI, ny alarobia 23 novambra. Ny andron’ny alarobia maraina teo vao hita mikoropaka ny fanjakana mandraraka […]
Ranöe : « Tsy marina ny filazana fa tsy misy mpanoratra… »
Par Taratra sur 24/11/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Maro ny voka-pandinihana efa nivoaka momba ny tontolon’ny vakiboky eto Madagasikara. Anisan’ireny ny filazana fa « tsy misy mpanoratra eto. Faharoa, tsy tia mamaky boky intsony ny olona ». Hentitra ny valintenin’i Ranöe, mpanoratra sady mpampianatra taranja malagasy, « tsy marina ireo filazana ireo. Manana mpanoratra ny Malagasy sady tia mamaky boky izy ». Nohazavainy tamin’izany fa « ny famoahana […]
Fampianarana : miara-miasa ny IST sy ny oniversite Quebec 3 rivières
Par Taratra sur 24/11/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tontosa omaly, tetsy Ampasapito, ny sonia fanavaozana ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny IST telo eto Madagasikara (Antananarivo, Ambositra aryAntsiranana) sy ny oniversite Quebec trois rivières. Haharitra dimy taona izany fifanarahana izany. Efa naira-niasa hatramin’ny taona 1990 ny roa tonta. Nahita fahombiazana izany ka izao nohavaozina izao indray. Anisan’ny efa niarahana ny fampianarana ny “module de formation” […]
Mitohy ny “Sômaroho Tour” : fahombiazana ny dian-dry Wawa tany Frantsa
Nahavita seho 12, hipoka mpijery avokoa! Mitana ny lazany eto ka hatrany ivelany i Wawa sy ny tariny. Tsy miato fa mitohy hatrany ny fitetezam-paritra. Nigadona an-tanindrazana omaly, ny tarika iray manontolo. Avy hatrany dia ny nizara ny vaovao tsara ho an’ny mpiray tanindrazana no nataon-dry Wawa. Fantatra mantsy fa fahombiazana avokoa ny seho rehetra […]
Fiainam-piangonana : raikitra ny tsangambaton’ny FJKM
Efa manomboka ny asa fanamboarana ny tsangambato faha-50 taon’ny FJKM, hatsangana eny amin’ny kolejy teolojia eny Ivato. Haharitra roa taona latsaka ny fanamboarana izany trano, ho an’ireo mpianatra ho mpitandrina eny an-toerana izany ary mitentim-bidy 7 tapitrisa dolara ity fanorenana fotodrafitrasa ity. Hanorenana trano hipetrahan’ireo mpiofana sy trano fianarana ity toerana ity. Na izany aza, […]
Frankofonia : mahazo tombony ny mpisehatra amin’ny « cinéma »
Maro ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-javakanto miara-dalana amin’izao fandraisantsika ny fihaonana an-tampony faha-16 an’ny frankofonia izao. Azo lazaina ho mahazo tombony manokana amin’ireny anefa ireo mpisehatra sy mpankafy sarimihetsika. Herinandron’ny horonantsary frankofona ity herinandro ity ary maro ny hetsika karakarain’ny fikambanana Vues d’Afrique sy ny Rencontres du film ary ny OIF, nanomboka ny talata teo […]
Raharaha Mampikony : olona miisa 17 niakatra fampanoavana ao Mahajanga
Niakatra fampanoavana omaly ao Mahajanga ireo olona miisa 17 voasambotra tamin’ilay raharaha tao Mampikony, ny 4 novambra 2016 lasa teo. Mbola mitohy ny fikarohana ny naman’izy ireo… Natolotra ny fampanoavana ao Mahajanga omaly ireo olona miisa 17 voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ilay raharaha nitranga tao Mampikony, ny 4 novambra 2016 lasa teo. Fantatra, araka ny loharanom-baovao […]
Azo lazaina fa voalohany eto amintsika ny fampiasana alika amin’ny fitandroana ny filaminana, indrindra amin’ny fisian’ny raharaha goavana eto amin’ny firenena. Mandray anjara feno amin’ny fiarovana sy ny fitandroana ny filaminana eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, mandritra izao frankôfônia izao ny Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI). Alika nohafarana manokana, ary manampahaizana amin’ny fitsirihana baomba […]
Barikadimy Toamasina : fivarotan-kazo kilan’ny afo, antapitrisany ny entana may
Raikitra ny fifanjevoana tao Barikadimy Toamasina, omaly nandritra ny firehetan’ny toeram-pivarotan-kazo sy trano maromaro any an-toerana. Tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra fa tapitra levon’ny afo. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ny firehetana fa ny afo efa nijoalajoala no nahataitra ireo olona teo amin’ny manodidina. Niainga […]
Fiara tapaka frein teny Faravohitra : voatsindrin’ilay 4×4 ilay raim-pianakaviana
Raim-pianakaviana iray no naratra mafy voafaokan’ilay fiara 4×4 tapaka frein, nivadika teny Faravohitra manoloana ny EPP Ampasandratsarahoby. Araka ny fanazavan’ilay niharam-boina, tamin’ny 5 ora latsaka fahefany no nitranga ny loza raha iny niakatra nandeha an-tongotra ity raim-pianakaviana ity sy ny zaodahiny. “Nandeha mafy avy any ilay fiara 4×4 samy tsy nanampo na inona na inona […]
Analakely : vazaha saika nodarohan’ny olona
Vazaha iray no saika nodarohan’ny olona teny Analakely, omaly antoandro. Notifirin’ilay vazaha tamin’ny big boss ny mpamily taxi iray satria nolazainy fa voadonan’ilay mpitondra taxi izy. Tsikaritry ny olona anefa ny fihetsik’ilay vazaha ka nirohotra nanampy ilay mpamily taxi ny olona. Nentin-katezerana ny olona ka efa samy niomana ny hidaroka azy, saingy hitan’ireo polisy nisahana […]
Par Taratra sur 24/11/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nanomboka niatrana, omaly indray ny sasany amin’ireo fiara mifono vy raha efa nisantatra izany ny fametrahana ny sasany amin’izy ireo teny Ivato sy Ambohitsorohita ny asabotsy teo, nahatongavan’ny mpanjaka maraokanina eto amintsika. Handray vahiny sy olobe maneran-tany rahateo isika. Anisan’ny ahitana azy ireo anoloan’ny vavahadin’ny tobin’ny Bani Ivato. Ny fidirana eo amin’ny vavahadin’ny CCI […]
Resaky ny mpitsimpona akotry : sotasota miampanga toe-tsaina
Par Taratra sur 23/11/2016 Elucubrations, NS Malagasy
Kpa ! Kpa! Kpa! Aza taitra fa tsy poa-basy akory izany fa kamiao-be misosasosa eny ankavian-dàlana mandripandripaka ny “rétroviseur”–n’ny fiara maromaro milahatra amin’ny sisiny an-kavanana, voageja anatin’ny fikatson’ny fifamoivoizana. Mety ho ireny fiara tsy mataho-dàlana angamba ilay fiara be. Fa ny azo antoka dia tsy mataho-tody ilay izy, na ny mpitondra azy no marimarina kokoa. […]
Run Total Quartz : hamaritra izay ho tompondakan’i Madagasikara
Par Taratra sur 23/11/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hotontosaina ny alahady 4 desambra ho avy izao, any amin’ny «piste» Batac Arivonimamo, ny dingana fahenina sady farany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny run sy ny prorun. Ny klioba Antananarivo Auto Moto (Ama), mikarakara izany izay fanintelony amin’ity taona ity, ny hanatontosany izany. Hangotraka ity dingana farany ity, satria io no hamaritra […]
Kitra eran-tany : voaroaka tsy ho mpanazatra an’i Etazonia intsony i Klinsmann
Par Taratra sur 23/11/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tapaka ny tady eo amin’ilay Alemà, i Jurgen Klinsmann sy ny federasiona amerikanin’ny baolina kitra. Nofaranana hatreo mantsy ny fitondran’i Klinsmann (Klinsi) ny ekipam-pirenen’i Bekintana, noho ny faharesena nisesisesy. Tapitra ny alatsinainy 21 novambra lasa teo, ny maha mpanazatra ny ekipam-pirenen’i Etazonia, an’ilay Alemà, i Jurgen Klinsman. Noho ny vokatra ratsy azon-dry zareo Bekintana eo […]
Nitohy, omaly teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny andro fahatelo amin’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI), taranja handball. Tafakatra eo amin’ny ankatoky ny famaranana ny AS Tsiky Boeny, eo amin’ny vehivavy, vondrona “B”. Nahazo fandresena fanindroany mantsy ity ekipa malagasy ity, rehefa nandresy ny Boueny avy any Mayotte, tamin’ny isa tery 25 […]
Harena an-kibon’ny tany : liana koa ny Maraokanina
Par Taratra sur 23/11/2016 Economie, NS Malagasy
Tafiditra ao anatin’ireo fifanarahana 22, vita sonia ny 21 novambra teo amin’ny fitondrana Malagasy sy ny fanjakana maraokanina ny fiaraha-miasa amin’ny lafiny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Tsy voalaza ny antsipiriany, ny harena ambanin’ny tany mahaliana azy ireo, na vatosoa, na akora fototra ambanin’ny tany ilaina amin’ny indostria, na koa solika. Amin’ny maha firenena arabo azy, […]
« Précédent 1 … 1 078 1 079 1 080 1 081 1 082 … 1 359 Suivant »